Ubundlobongela obuphathelele kwezesondo Intsingiselo: iinyani ezi-5 ekufuneka Sazi
Iinyani ezi-5 malunga nobundlobongela obuphathelele kwezesondo sonke kufuneka sazi
Eyona Ndawo iRave-eBaluleke kakhulu ijonge kuBasetyhini kwiAfrika iphela-nge-2 eyoMdumba
A Usuku olutsha lufikile. Abantu ekugqibeleni banazo iingxoxo ezivulekileyo nezinyanisekileyo malunga nezesondo, impilo yezesondo, ubundlobongela obuphathelele kwezesondo kunye nazo zonke izibonda abazibandakanyayo. Ngexesha elide, iingxoxo ezinjalo zazinengqondo okanye kungenjalo kwaphela, kodwa ekugqibeleni, izinto zijonge phezulu kwaye kungcono thina.
Abafazi abancinci bakhula baqhele ukuthatha olo hambo lokuhlaziseka kusasa emva kobusuku basendle ngaphandle kwaye babengekhe bathethe nelimdaka nakubani na ngokwaphulwa kuba baya kugxekwa ngenxa yokungazithembi nokungakhathali kwabo. Abanye abanye nje banesihlobo okanye umhlobo osenyongweni wabasebenzisa, esaphula ukuthembela kwabo kwisikhokelo sokuqhelana. Kwihlabathi liphela, iimeko ezinje ngezi zenzeka yonke imihla kwaye abanye bethu bayayicekisa ngokuguqula enye impama ngokungabi naluhlobo lude, luze luthi luye ekhayeni emva koko sonke sibe ngabaphembeleli abakhoyo.
Ke yintoni ubundlobongela obuphathelele kwezesondo? Ingcaciso yobundlobongela obuphathelele kwezesondo
Ubundlobongela obuphathelele kwezesondo kubhekisa kuso nasiphi na isenzo sesondo okanye ukuzama ukufumana izenzo zesondo ngogonyamelo okanye ngokunyanzela. Njengezihloko ezinobuthathaka kakhulu, kuninzi ukungazi okunxulumene nobundlobongela obuphathelele kwezesondo.
Kukho izinto ezithile abantu abangazazi ngokupheleleyo okanye ngokungachanekanga, abanokuziqonda kwaye kulapho ukuba uzixhobise ngolwazi oluchanekileyo oza kudlala khona kwaye ukuba wonke umntu uyakuthatha uxanduva lokwazisa kwabo ngesondo umhlaba uyindawo ekhuselekileyo.
Ezi ezinye iinyani malunga nempilo yezesondo sonke esifanele siyazi
# 1. Ubundlobongela obuphathelele kwezesondo bunokwenzeka nakubani na kuthi
Ubundlobongela obuphathelele kwezesondo bunokwenzeka kuye nabani na ngaphandle kwesini, ubudala, ubuhlanga, inkolo, kunye nodidi lwezoqoqosho. Iyothusa into yokucinga kodwa iyinyani ngelishwa. Oku kufanele kusenze siziqaphele ngakumbi kwaye silumkele naluphi na uhlobo lobundlobongela obuphathelele kwezesondo kwaye singavumeli iindlebe ezivayo kuba nje zingenzeki kuwe okanye kumntu omaziyo. Kwakhona, ukuba uyazi ukuba inokwenzeka kuwe okanye kumhlobo wakho omthandayo, uvelwano luya kuphuma ngokwendalo.
# 2. Ihlala ingumntu omaziyo
Uninzi lokuhlaselwa ngokwesondo kunye nodlwengulo lwenziwa ngumntu olaziyo ixhoba. Uphononongo lubonisa ukuba phakathi kwexhoba elineminyaka eli-18 ukuya kwengama-29, isibini kwisithathu sasinolwalamano lwangaphambili kunye nomoni. Kungenxa yoko le nto kufuneka kuthathwe amanyathelo okuphepha ukuthintela le meko. Xa kufikwa ebantwaneni, musa ukubashiya abancinci bakho kunye nabani na ngaphandle kwelebheli yosapho ehambelana nabo. Bafundise ukuba bazithethelele xa umntu ebabamba ngokungafanelekanga kwaye ubancede bakuthembe kwaye bakhululeke ngokwabelana nawe naziphi na iindaba.
Njengomntu okhulileyo, ukuba ngononophelo malunga nomntu ondwendweleyo kunye nomntu ondwendwelayo uyakuhamba indlela ende ukunqanda ubundlobongela obuphathelele kwezesondo. Ilizwi "Ngulowo ukwaziwa nguwe okwaziyo ukubulala" inzulu kakhulu kwaye iyinyani.
# 3. Ingcebiso ayivunywa
Woohoo !!! Isiselo okanye ezibini aziyi kwenzakalisa mntu naphambi kokuba wazi ukuba umhlaba uyajikeleza kwaye sikwinkqubo enkulu kakhulu. Oku kwenzekile kuninzi lwethu ngexesha elinye ebomini kwaye ukuba awuyazi, kulunge kuwe. Oku akuthethi ukuba uye waphulukana nolawulo lwakho kodwa ukuxhaphaza umntu osengozini kuphosakele kakhulu. Ukuba phantsi kwempembelelo yotywala okanye iziyobisi ayisosimemo sokwabelana ngesondo. Umntu ophantsi kwempembelelo yeziyobisi okanye wotywala akakwazi ukwenza izigqibo ezizinzileyo okanye anike imvume, ngenxa yoko akufuneki anyanzelwe nakuluphi na umsebenzi wesondo.
# 4. Ukuhlaselwa ngokwesondo AKUFUNI kwityala lakho
Ibala elixhonywe kumaxhoba obundlobongela obuphathelele kwezesondo lihlala lishiya amaxhoba enetyala kwaye eneentloni. Kwiinkcubeko ezininzi ukusuka eNigeria ukuya e-United States, e-India ukuya e-UK, le kuphela kwetyala apho ixhoba libekwa ityala ngokuba lixhoba. Ngaba ichanekile? Ngokuchasene nenkolelo ethandwayo yokuhlaselwa ngokwesondo akuxhokonxwa zizenzo zexhoba, ngokuziphatha, okanye ngendlela abanxiba ngayo. Yenziwa ngumntu ongakwazi kuzibamba kwaye ukhathazwa, ngandlela thile. Kuluxanduva lwethu ukunceda amaxhoba obundlobongela obuphathelele kwezesondo ukuba baqonde ukuba yayingesosiphoso sabo kwaye ukuba ukunyanga kunokwenzeka.
# 5. Ukuphilisa kunokwenzeka
Ukuphathwa gadalala ngokwesondo kushiya ixhoba lihlaselwe emzimbeni nangokweemvakalelo kwaye ixesha elide emva kokonzakala emzimbeni kuphulukene nezibazi zeengqondo ezisindileyo. Ukubuyisela ekuhlukumezeni ngokwesondo okanye ekuphathweni gadalala kuthatha ixesha kwaye akukho namnye umntu ofanele ukuba akhawuleziswe “ayigqithe.” Amaxhoba kufuneka anyamezele kuwo, afune uncedo lweengcali kunye nokuzilolonga. Inkxaso kunye novelwano zihamba indlela ende yokwenza ukuba amaxhoba azive ekhuselekile ukuba angaphola.
Kubalulekile ukuba sizigcine sinolwazi ngobundlobongela obuphathelele kwezesondo kwaye sihlale sinencoko eluncedo ngesihloko kuba, xa kuphela usuku, utshintsho luqala kuye ngamnye wethu.
Utywala dlwengulo isini ubundlobongela obuphathelele kwezesondo
UVivian Bens-Patrick Februwari 5, 2020
I-Rave News Digest: U-Lil Wayne uthi ungowaseNigeria, eTokyo 2020, Umgaqo-nkqubo omtsha weVisa eNigeria + Okungakumbi
Iindlela ezi-6 zokuYila ukuze uMlingane wakho azi ukuba uthanda ntoni embhedeni
Ngaba iVaseline lolusu olufanelekileyo olufanelekileyo malunga nesini? | Indlela yokuphila ye-SR
Ukutya oku-7 okukuNceda ukuKhulisa uBomi bakho boBulili